तपाइलाई ह्रस्व दीर्घको समस्या छ ? याहाँ हेर्नुहोस [भिडियो]
गफगाफ / तपाइलाई नेपाली व्याकरणमा ह्रस्व दीर्घका नियम नआएर समस्यामा हुनुहुन्छ ? अब त्यसको समाधान गीत मार्फ प्रप्त गर्न सकिने भएको छ । एआइए स्कुल शंखमुलका प्रवन्ध निर्देशक विमल घिमिरेले ह्रस्व दीर्घका नियमका नियमहरुलाई गीत मार्फत प्रस्तुत गरेका छन् ।
‘नेपाली व्याकरण’ शीर्षकमा सार्वजनिक भएको गीतको परिकल्पना गर्ने घिमिरे नेपाली भाषाका शिक्षक हुन् । उनकै शव्द रहेको गीतमा राजकुमार घिमिरेको लय छ भने शारदा पराजुलीको स्वर रहेको छ । गीतमा ह्रस्व दीर्घका नियमलाई लयबद्ध ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली व्याकरणमा ह्रस्व दीर्घका नियमको ठूलो महत्व छ । तर अधिकांश ह्रस्व दीर्घमा झुक्किने गर्छन् । यदि तपाईं पनि नेपाली लेखनमा ह्रस्व दीर्घमा झुक्किने गर्नुभएको छ भने तपाईंका लागि गीत नै तयार पारिएको छ । भिडियोको छायांकन स्कुल परिसरमै गरिएको हो ।